मुस्ताङ दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेका परिवारजानलाई ५/५ लाख दिइने !
असार २५, २०७५ Bigul Media | BN
काठमाडौं । सरकारले मुस्ताङको स्याङ्बोचेमा भएको ट्रीपर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका २० जना मृतकका परिवारजनलाई ५/५ लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ।
सोमबारको बसेको प्रतिनिधि बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उक्त घटनामा ज्यान गुमाएका व्याक्तिहरुको परिवारलाई राहत स्वरूप रु. ५/५ लाखको दरले दिने जानकारी गराएका छन्।
मुस्ताङको स्याङ्बोचे लोमान्थाङ सडक निर्माणका क्रममा खाना खाएर टि्रपर चढेर काम गर्न जाँदै गर्दा दुर्घटना हुँदा २० जनाको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनामा घाइते भएका १२ जनाको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । उनीहरु सबै खतरामु्क्त रहेका छन् ।
मृतकको शव सम्बन्धित जिल्लामा नै पोस्टमार्टम गरी परिवारलाई जिम्मा लगाइने गृहमन्त्री थापाले जानकारी दिए । दुर्घटनामा सबैभन्दा धेरै रोल्पाका ९ जना र दाङका ६ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै धादिङ, स्याङ्जा, ओखलढुंगा, कैलालीका १/१ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
प्रकाशित : सोमबार, असार २५, २०७५१४:४४
काँग्रेसलाई भट्टराईको कटाक्ष: मार्सीचामलको भात चरेशको थालमा खाएका छन् कि दुना टपरीमा अनुसन्धान गर्नुस् !